Samsung Galaxy M30s ga-abata na Europe | Gam akporosis
Samsung Galaxy M30s agaghị abụ naanị India: ọ ga-abata na Europe
A maara nke ahụ el M30s Galaxy ga-ewepụta Samsung n'oge na-adịghị anya, nakwa dịka a makwaara na India ga-abụ isi ahịa ebe a ga-ebupụta ya. Na mbụ ekwuru na nke a ga-abụ naanị mba ebe a ga-ere ya, mana ọ dị ka ọ gaghị adị otu a; ụlọ ọrụ Asia na-akwadebe ya maka mpaghara Europe.
Nke a September 18 ga-chie mara ọkwa na India dị ka mmeghari ohuru nke Galaxy M30 mbụ nke rutere. Enwere ọtụtụ mba Europe nke nwekwara ike ịnụ ụtọ elele niile nke ọdụ a, na anyị kwuru banyere ha ugbu a.
Dika akuko ohuru nke biara n'ile anya dika uzo, mba Europe nke kwesiri Samsung Galaxy M30 nwa Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain na United Kingdom. O doro anya na ndepụta a ga-agbasa ma emesịa, nke mere na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa ka a ga-agbakwunye, ka ọnụ ọgụgụ ahụ wee rute ọkwa ụwa.
Samsung Galaxy M30s ga-eji batrị 6,000 mAh kụrụ ahịa ahụ
The Galaxy M30s maka Europe na-abịa na akara ngosi nọmba SM-M307FN na na-atụ anya ịwepụta otu ngwaike ngwaike dị ka nsụgharị India. Agbanyeghị, ụbọchị ahụ kpọmkwem mgbe a ga-ebupụta ngwaahịa na mpaghara ahụ ka na-ekpuchi. Companylọ ọrụ ahụ ga-ekpughe ya mgbe ngosi mmemme nke otu ihe ahụ na nnukwu mba Eshia.
A na-atụ anya ịbịakwute chipset Exynos 9611 nwere isi asatọ yana n'ụdị nwere 4 na 6 GB nke RAM. Nhọrọ nhọrọ dị n'ime gị ga-abụ 64GB na 128GB. N'ikpeazụ, a ga-enwe nnukwu batrị 6,000 mAh buru ibu yana ọdụ USB-C maka ịgba ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ na nke a emee, Galaxy M30s ga - abụrụ Samsung nke mbụ nwere batrị nke ikike a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy M30s agaghị abụ naanị India: ọ ga-abata na Europe
Otu esi eme ka Onye Mmepụta Nhọrọ rụọ ọrụ na gam akporo 10